यस्तो कथाको साथ बन्ने भयो बिपिन र वर्षाको “जात्रै जात्रा” !! - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
यस्तो कथाको साथ बन्ने भयो बिपिन र वर्षाको “जात्रै जात्रा” !!
कार्यक्रममा बोल्दै नायक विपिन कार्कीले ‘जात्रा’बाट सबैको माया पाएको भन्दै त्यो भन्दा राम्रो काम यसमा गर्ने बताए । नायिका बर्षा राउतले फेरि पनि यो टिमसँग काम गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरिन् । यस्तै, चलचित्रका कार्यकारी निर्माता रविन्द्र सिंह बानियाँले चलचित्रको कथा ‘जात्रा’को भन्दा पनि उत्कृष्ट भएकाले निर्माण गर्न लागेको बताए । निर्देशक प्रदिप भट्टराइले आफूलाई ‘त्र’ खुबै फापेको बताए । यसैले पनि ‘जात्रै जात्रा’ सफल हुने उनको भनाई थियो ।
Barsha RautBipin Karki